जीवन सैली Archives - DerbyKhabar
जाडो मौसममा रुघाखोकीको घरेलु उपचार
काठमाडौं ११ मंग्सिर ।। जाडोयाम सुरु हुनासाथ, मौसममा आएको परिवर्तनका कारण रुघा–खोकीको समस्या देखिन थाल्छ । घाँटी खसखस हुनु, नाक बन्द हुनु, नाकबाट पानी बग्नु, रुघाखोकी आदि यो मौसममा देखिने सामान्य समस्या हुन् । बूढापाका, बालबालिका र जटिल स्वास्थ्यस्थिति भएकाहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीले समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरूले सामान्य रुघाखोकी हुँदा पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर स्वस्थ[Read More…]
November 27, 2019 —	0 comments —
हड्डी खिइने समस्या भएकाहरूका लागि रायोको साग लाभकारी
काठमाडौँ,४ मंग्सिर ।। हड्डी खिइने समस्या भएकाहरूका लागि रायोको साग लाभकारी हुन्छ रायोको सागमा भिटामिन–के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । सागमा रहेको भिटामिन के ले हड्डीलाई आवश्यक पर्ने खनिज प्रदान गर्छ । साथै, यसले रगत जम्ने र अनावश्यक ठाउँमा क्याल्सियम जम्मा हुने क्रम पनि रोक्छ । त्यस्तै रायोको सागबाट पाइने अन्य फाइदाहरु निम्न प्रकारका रहेका छन् । – रायोको सागबाट भिटामिन[Read More…]
November 20, 2019 —	0 comments —
जिबनमा सफल व्यक्ति बन्न यी नराम्रा बानीलाई आजैबाट त्याग्नुहोस
काठमाडौँ ३१ भदौ ।। हामी सबैमा केहि न केहि खराब बानीहरु हुन्छन्, र त्यो सामान्य पनि हो । तर यी सामान्य लाग्ने बानीहरु करिअर र जीवनको बाटोमा सफतालाई रोक्ने अवरोध पनि बनिरहेको हुनसक्छन् । यहाँ त्यस्ता १० बानीव्यहोराहरु प्रस्तुत गरिएको छ जुन तपाई र सफलताको बीचमा पर्खाल बनेर उभिएको हुनसक्छ ।कतै तपाईमा पनि यस्तो नराम्रो बानि त छैन? छन् भने आजै बाट[Read More…]
September 17, 2019 —	0 comments —
आज २६ भाद्र २०७६ बिहिवारको राशिफल बिहिबार यी कार्य गरेमा अशुभ फल प्राप्त हुन्छ
आज २६ भाद्र २०७६ बिहिवारको राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा रहला । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) आजको दिन भाग्यशाली भएर देखा पर्नेछ । महिला वर्गबाट विशेष[Read More…]
September 12, 2019 —	0 comments —
एक अनुसन्धान अनुसार मानिसहरूको रगत समूह अनुसार उसको चालचलन र आनीबानीबारे थाहा पाउन सकिन्छ । रगत समूह फरक भएमा मानिसको विचार र बानी फरक हुने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। रगत समूहसँग सम्बन्धित केही बानीको बारे जानकारी ले के भन्छ त? Group A :- यो रगत समूह करिब ४० प्रतिशत मानिसहरूमा हुन्छ जसमा ३४ प्रतिशतमा A+ र ६ प्रतिशतमा A- पाइन्छ। यो रगत[Read More…]
मेष: मेष राशिका व्यक्तिहरु उत्साहका साथ काम गर्न मन पराउँछन् । प्रायः मेष राशिका व्यक्तिहरुले आफ्नो कुराहरु सिधा तरिकाले प्रस्तुत गर्ने भएकोले उक्त बानीको कारण पछुत्ताउने गर्छन् । किनकी सबैलाई खुलेर कुरा गरेको मन नपर्न सक्छ । भोली भन्दापनि आज नै सोचेर मोज गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाव यी व्याक्तीहरुमा हुन्छ । मेष राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो काममा भन्दापनि अरुको काममा रमाउने खालको[Read More…]
August 3, 2019 —	0 comments —
आज – १४ साउन २०७६ मंगलवार को राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । समाजिक कार्यमा मन जाला । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ला । वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ[Read More…]
July 30, 2019 —	0 comments —